Fandoavan-ketra : Namoraina amin’ny alalan’ny « Hetraonline » -
AccueilSongandinaFandoavan-ketra : Namoraina amin’ny alalan’ny « Hetraonline »
11/07/2018 admintriatra Songandina 0
Nampahafantarin’ny teo anivon’ny sampandraharahan’ny hetra (DGI) omaly, fa mitohy hatrany ny fanatsarana, izay efa natombok’izy ireo nandritra ny taona maromaro. Araka izany, tafapetraka ary efa miasa sy azo ampiasaina nanomboka omaly ny fanambaran-ketra sy fandoavan-ketra amin’ny alalan’ny « internet ». Nampitondraina ny anarana « Hetraonline » ity tetikasa sy tolotra vaovao ho an’ny fandoavan-ketra ity.
Voalaza fa ho fanamorana ny fanambaran-ketra sy fandoavan-ketra no antony goavana nametrahana ity tetikasa “Hetraonline” ity. Eo ihany koa ny antoka omena ireo mpandoa hetra amin’ny fiarovana ny vola haloany, ary indrindra indrindra ny fanafoanana ny kolikoly eny anivon’ireo ivon-ketra.
Raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny sampandraharahan’ny hetra, Razafindrakoto Louri Garisse, fa azo atao sy tanterahina hatrany ny manao fanambaran-ketra sy fandoavan-ketra manerana an’i Madagasikara rehefa miditra amin’ilay tranonkalan-tserasera. Azo atao ihany koa, hoy hatrany izy, ny mamoaka avy hatrany ny mombamomba ilay taratasy momba ny hetra, izay ilain’ny mpandoa hetra, toa ny olon-tsotra (hetra tany, hetra trano, sns), mpiasa amina orinasa sy ireo orinasa goavana, mpandraharaha, sns.
Anisan’ny mampiavaka ity teknôlôjia amin’ny tontolon’ny fandoavan-ketra ity ny fampiasana azy, izay tena faran’izay tsotra indrindra ho an’ireo efa mpikirakira ny “internet”. Vantany vao miditra amin’ny tranonkalam-pifndraisan’ny sampandraharahan’ny hetra, tazana sy mipoitra ao avokoa ny torolalana rehetra tokony harahin’ny mpandoa hetra. Na izany aza anefa, hisy ny fampiofanana sy fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika azy ity manerana ny faritra maro eto Madagasikara.
Ankoatra izay, efa miroso tsikelikely amin’ny tetikasa fandoavan-ketra amin’ny alalan’ny finday ihany koa izy ireo amin’izao fotoana izao. Nampitondraina ny anarana “Hetraphone” indray izany, saingy mbola amin’ireo ivon-ketra mendrika roa eto Antananarivo no misy azy (boriborintany fahatelo sy eny Alasora). Voalaza fa mbola ao anatin’ny andrana tanteraka amin’ity tetikasa ity ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny hetra amin’izao fotoana izao.
Marihina fa ny Banky Iraisam-pirenena kosa no mamatsy vola amin’ireo tetikasa roa eo amin’ny tontolon’ny fanambaran-ketra sy fandoavan-ketra ireo.